Ukuphupha ngeYak Discover️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Igama elithi "yak" livela kwi-Tibetan. Ngale okanye nangegama elithi "Jak" kudweliswa uhlobo lweenkomo, oluxhaphake kakhulu kuMbindi weAsia kwaye ligcinwa ikakhulu eChina naseTibet njengeenkomo zasekhaya.
Kuba i-yak yenza ingxolo efana nokugquma, ngakumbi ngexesha lesiqhelo, ihlala ibizwa ngokuba yi-Asia. I-yak yasekhaya ifumaneka ikakhulu kwiiHimalaya, eMongolia naseSiberia esemazantsi. Kwelinye icala, i-yak yasendle isengozini yokuphela.
I-Yaks inokuziqhelanisa kakuhle neemeko zokuphila ezibi kakhulu. Ukongeza, ezi nkomo zisengukuphila kwabantu abahlala apho namhlanje kwaye bababonelela ngenyama nobisi, kunye nesikhumba, iinwele kunye noboya. Nkqu neelensi zabo zisetyenziselwa ipetroli. Kodwa ii-yaks zisetyenziswa njengokukhwela kunye nokupakisha izilwanyana.
Kwimimandla yethu, ii-yaks azifumaneki. Ke ngoko, ukuba umntu uphupha ngenkomo enjalo, ngokuqinisekileyo uyazibuza ukuba kunokuthetha ntoni oku.
Kwinxalenye elandelayo yokutolika iphupha, uya kufunda konke malunga neenkomo ezibizwa «Yak»:
1 Isimboli yamaphupha «Yak» - awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
1.1 I-yak emhlophe njengesilwanyana sephupha. Ialbino enentsingiselo ekhethekileyo ...
2 Isimboli yephupha «Yak» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «Yak» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «Yak» - ukutolika kokomoya
Isimboli yamaphupha «Yak» - awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
I-yak emhlophe njengesilwanyana sephupha. Ialbino enentsingiselo ekhethekileyo ...
I-yak luhlobo lweenkomo ezinqabileyo ezinokufumaneka emaphupheni, kodwa ngoboya obumhlophe (ngokuchaseneyo nenyani) yenzeka rhoqo. Umbala omhlophe wengubo ubonakalisa ubunyulu, ubumsulwa kunye nobufazi. Ukugqithiselwa kwinkomo ephupheni, isilwanyana esikhanyayo sibonisa ukuba umntu oleleyo ugcina amandla akhe ezesondo kunye nefantasy. Iitabo kunye nemithetho yentlalo ithintela umntu ekubeni akhule ngokukhululekileyo kwisini sabo. Kwangelo xesha, ungumntu onontlalontle ophatha indawo akuyo ngononophelo kunye nokuzonwabisa.
Isimboli yephupha «Yak» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa ngokubanzi kwephupha kutolika i-yak ephupheni ikakhulu njengophawu lwe Ukunyamezela kunye nokuzingisa okubonisa umphuphi el mundo ukuvuka. Kwakhona, uphawu lwephupha "Yak" lunokubhekisa kwisisa salowo uleleyo.
Umhlambi wee-yak ephupheni uhlala ubonisa umnqweno wamandla akho, kunye nokukhangela impembelelo. Umbono we-yak yasendle ephupheni lakho unokubonisa ingqumbo ejulile okanye eyimfama. Ubundlongondlongo bhekisa.
Ukuba ubulala i-yak ephupheni lakho, kuya kufuneka ulumke malunga neendleko ezinkulu ebomini bokuvuka. Kuba oku kunokubangela ilahleko ebonakalayo kuqoqosho. Inyama ye-Yak njengephupha ihlala ibonisa oko Amandla wentando ukusuka kumntu oleleyo, owaziyo ukuyisebenzisa kakuhle kwilizwe lokwenyani. Ukuba inyama iluhlaza ephupheni, umntu akufuneki enze ngaphandle koncedo lwabanye, kodwa kungcono ukwamkela uncedo olunikezelwayo.
Ukuba umphuphi uqhuba iinwele okanye uboya be-yak ngelixa ulele, oku kunokuhlala kuthathelwa ingqalelo kwi uphuhliso oluhle yalatha kwicandelo lobuchule okanye loshishino. Isikhumba se-Yak njengophawu lwamaphupha zihlala zibonisa ukomelela nokungakhathali.
Uphawu lwephupha «Yak» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo lokuchazwa kwephupha, umfanekiso wephupha "Yak" uhlala utolikwa ukuba uthetha inkomo. Kungenxa yoko le nto inokusetyenziswa njengophawu lwesini amandla eyindoda Makuqwalaselwe. Umphuphi kufuneka ngokwesiqhelo abe nolwazi ngalo mandla ngephupha elinje.
Ukubona ii-yak ezininzi zilele edlelweni zihlala zifuna umbulelo, kodwa zikwabonisa ukwanda kosapho lwakho. Ukuba i-yak ibonwa ephupheni njengesilwanyana sasendle, umntu kufuneka abone amandla ayo okuqhuba ngaphakathi. Kwakhona kunokubakho imbekiselo eyakho Ithuku fihla.
Ukuba ubona inkomo ye-yak ephupheni, oku kungathetha, ngokwenkcazo yengqondo yephupha, kulangazelelo olufihliweyo lwephupha lokukhathalelwa nokuthuthuzelwa. Ukusenga ubisi kwi-yak yabasetyhini ngelixa elele kuhlala kuboniswa Suerte okanye ubutyebi.
Uphawu lwephupha «Yak» - ukutolika kokomoya
Isimboli yamaphupha «Yak» isetyenziselwa uhlalutyo olungaphaya kwephupha njengophawu lwasendle, kodwa kananjalo ukumelana labaphuphi kwizinto zokomoya.